जीवन सयौं चिकित्सा व्यवहार मा एन्टिबायोटिक प्रयोग समयमा सुरक्षित छन्। रोगनाशक ओषधि को खोज सजिलो भएको XX सताब्दी को शुरुवात सम्म जाती नहुने विचार थिए रोगहरु बाट मान्छे छुटाउन गरे।
रोगनाशक ओषधि आविष्कार गर्न चिकित्सा
शताब्दीयौंदेखि चिकित्सा विरामीहरु को जीवन सुरक्षित गर्न असमर्थ छ। एक सफलता पहिलो चरण धेरै रोगहरु को मूल को प्रकृति को तथ्यलाई को खोज थियो। हामी सबै भन्दा रोग सूक्ष्मजीवहरु को हानिकारक प्रभाव को एक परिणाम रूपमा खडा भन्ने तथ्यलाई बारेमा कुरा गर्दै छन्। चाँडै पर्याप्त, वैज्ञानिकहरु भनेर बुझे रोग पैदा जीवाणुहरु रोगहरु को एजेन्ट "वैमनस्यता" देखाउँदै अन्य सूक्ष्मजीवहरु को मद्दतले नष्ट गर्न सकिन्छ।
आफ्नो चिकित्सा को पाठ्यक्रम मा, XIX धेरै वैज्ञानिकहरूले यस निष्कर्षमा आए। तिनीहरूमध्ये सूक्ष्मजीवहरु केही प्रकार को प्रभाव bacilli को मृत्यु जान्छ फेला पारेका गर्ने लुई Pasteur थियो Anthrax को। तर यो जानकारी पर्याप्त थियो। यो समस्या समाधान गर्न एक विशिष्ट प्रभावकारी तरिकामा फेला पार्न आवश्यक थियो। एक विश्वव्यापी चिकित्सा असफल बनाउन डाक्टर सबै प्रयासहरू। र केवल एक शुद्ध दुर्घटना र शानदार hunch रोगनाशक ओषधि आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक गर्न, Aleksandru Flemingu मदत गरे।
मोल्ड को उपयोगी गुणहरू
यो भन्दा साधारण मोल्ड जीवाणुरोधी गुण छ भन्ने विश्वास गर्छन् गर्न गाह्रो छ। तर यो साँचो हो। यो केवल एक खैरो-greenish पदार्थ, एक सूक्ष्म च्याउ छैन। यो पनि सानो, भ्रूण कि हावा हो देखि उत्पन्न हुन्छ। गरिब हावा परिसंचरण को अवस्था र मोल्ड अन्य कारक गठन गर्दै हुनुहुन्छ। रोगनाशक ओषधि अहिलेसम्म खुला थियो, तर XI शताब्दीमा, Avicenna गरेको काम एक मोल्ड को मद्दतले purulent रोगहरु को उपचार गर्न उल्लेख छ।
दुई वैज्ञानिकहरू बीच विवाद
को XIX सताब्दी रूसी डाक्टर को 60-एँ मा Aleksey Polotebnov र Vyacheslav Manassein गम्भीर तर्क। विवाद को विषय भएको मोल्ड थियो। Polotebnov यो सबै जीवाणुहरू को पुर्खा छ कि विश्वास गरे। Manassein दृश्य को विपरीत विन्दुमा जिद्दी, र आफ्नो निर्दोष साबित गर्न, अनुसन्धानहरूले एक श्रृंखला आयोजित।
उहाँले मोल्ड spores, उर्वर भूमि मा छरिएको जुन वृद्धि हेर्नुभयो। फलस्वरूप, वी Manassein जीवाणुहरु को विकास मोल्ड विकास क्षेत्रमा ठ्याक्कै उत्पन्न भएन देखे। आफ्नो राय अब प्रयोग गरेर पुष्टि गरिएको छ: मोल्ड वास्तवमा अन्य सूक्ष्मजीवहरु को वृद्धि लाइ रोक्छ। आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीको आफ्नो दाबी को त्रुटि स्वीकारे। यसबाहेक, Polotebnov उहाँले मनसायलाई मोल्ड को जीवाणुरोधी गुण अध्ययन गर्न थाले। त्यहाँ उहाँले पनि गरिबी छाला अल्सर निको को उपचार मा सफलतापूर्वक तिनीहरूलाई प्रयोग प्रमाण हो। को मोल्ड को गुण वर्णन आफ्नो वैज्ञानिक काम धेरै अध्याय Polotebnov समर्पित। एक वैज्ञानिक यी सुविधाहरू, विशेष छाला रोग को उपचार को लागि चिकित्सा प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको पनि छ। तर यो विचार अन्य चिकित्सकहरु द्वारा प्रेरित छैन र unfairly भूल गरिएको छ।
कसले रोगनाशक ओषधि आविष्कार
यो गुण चिकित्सा वैज्ञानिक Aleksandru Flemingu पर्छ। उहाँले सेन्ट को अस्पताल को प्रयोगशाला मा एक प्रोफेसर थियो लन्डन को मरियमको शहर। आफ्नो वैज्ञानिक काम मुख्य विषय - वृद्धि र staphylococci को गुण छ। रोगनाशक ओषधि को खोज उहाँले दुर्घटनामा प्रतिबद्ध थियो। फ्लेमिंग ठूलो हेरविचार प्रसिद्ध छैन, बरु त्यसको विपरीत। एक दिन, जीवाणु संस्कृति संग डेस्कटप नधोएका व्यञ्जन छोडेर केही दिन पछि उनले परिणामस्वरूप मोल्ड बताए। को मोल्ड जीवाणुहरु वरिपरि स्पेस नाश गरिएको छ भन्ने तथ्यलाई आफ्नो रुचि।
फ्लेमिंग मोल्ड द्वारा जारी पदार्थ को नाम दिए। उहाँले यो रोगनाशक ओषधि नाम। प्रयोग को एक ठूलो संख्या पूरा गरेपछि वैज्ञानिकहरूले यस पदार्थ हानिकारक जीवाणु विभिन्न प्रकारका मार्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त भए।
के वर्ष रोगनाशक ओषधि आविष्कार? 1928 मा, Aleksandra Fleminga अवलोकन यो समय पदार्थ मा एक चमत्कार हो दुनिया दिनुभयो।
उत्पादन र आवेदन
चिकित्सा को पहिलो अभ्यास आफ्नो खोज मा धेरै रुचि छैन त फ्लेमिंग, रोगनाशक ओषधि सिक्न सकेनौं। एक चिकित्सा रूपमा रोगनाशक ओषधि आविष्कार गर्नेहरू Govad Florey र Cheyn अर्नस्ट थिए। तिनीहरूले उनको सहयोगिहरु संग शुद्ध रोगनाशक ओषधि छुट्टयाएर, र यसलाई विश्वको पहिलो एंटीबायोटिक आधारित।
1944 मा, द्वितीय विश्व युद्ध, संयुक्त राज्य अमेरिका समयमा वैज्ञानिकहरूले रोगनाशक ओषधि औद्योगिक तरिका प्राप्त गर्न सक्षम छन्। दबाइ को परीक्षण समय एक बिट लिएको छ। लगभग तुरुन्त, रोगनाशक ओषधि को घाइते व्यवहार गर्न मित्र को सशस्त्र सेना प्रयोग गर्न थाले। युद्ध समाप्त हुँदा, संयुक्त राज्य अमेरिका को नागरिक जनसंख्या पनि चमत्कार उपचार किन्न सकिएन।
रोगनाशक ओषधि आविष्कार गर्ने सबै (फ्लेमिंग, Florey, दल) चिकित्सा नोबेल पुरस्कार मा मालिक भयो।
रोगनाशक ओषधि: रूस मा खोज को इतिहास
जब महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध अझै मा थियो, आई वी stalin रूस मा रोगनाशक ओषधि को उत्पादन को लागि लाइसेन्स खरिद गर्न धेरै प्रयास गरेको छ। तर संयुक्त राज्य अमेरिका ambiguously गर्नुभएको छ। पहिलो योगफल एक Astronomical, म भन्न पर्छ, नाम थियो। तर पछि यो प्रारम्भिक गलत गणना को वृद्धि बताउँदै दुई पटक बढेको छ। फलस्वरूप, वार्ता असफल भयो।
रूस मा रोगनाशक ओषधि आविष्कार गर्ने को प्रश्न मा, कुनै एकल जवाफ छ। analogues उत्पादन तरिका पत्ता microbiologist Zinaida Ermoleva चार्ज थियो। त्यो पछि krustozinom भनिन्छ, पदार्थ प्राप्त गर्न सक्षम थियो। तर यसको गुण यो दबाइ रोगनाशक ओषधि धेरै सानो छ, र उत्पादन को प्रविधि श्रम-गहन र महँगो थियो।
यो अझै पनि एक लाइसेन्स किन्न निर्णय भएको थियो। विक्रेता अर्नस्ट दल थियो। प्रविधि को कि विकास र पछि उत्पादन यसलाई सुरु। यो प्रक्रिया Nikolai Kopylov नेतृत्व। औद्योगिक उत्पादन रोगनाशक ओषधि को चाँडै स्थापित भएको थियो। यो Nikolay Kopylov बेला सम्मानित गरियो stalin पुरस्कार।
सामान्य र विशेष रोगनाशक ओषधि मा एन्टिबायोटिक पक्कै साँच्चै अद्वितीय गुण छ। तर आज, थप र थप वैज्ञानिकहरूले धेरै जीवाणु र जीवाणु यो चिकित्सकीय कार्य गर्न प्रतिरोध विकास चासो देखाउन छन्।
यो समस्या अब रूपमा साँच्चै, सावधान विचार र सम्भव समाधान आवश्यक छ जीवाणुहरु केही अब एन्टिबायोटिक को कार्य प्रतिक्रिया हुनेछ जब एक समय आउन सक्छ।
एएसडी (मैनबत्ती): प्रयोग र प्रतिक्रियाको लागि निर्देश
प्रभावकारी औषधीको देखि च्याउ
Puncher "Makita" (Makita): प्यारामिटरहरू, मूल्यहरू समीक्षा र टिप्पणीहरू को विकल्प
एक स्वादिष्ट र स्वस्थ नाश्ता खाना पकाउने: व्यञ्जन मा सूजी संग घरेलु पनिर बाट पनीर केक र अन्य भेरिएसनहरूमा
Unvarnished "एप्पल सुरक्षित छ"
किन राउन्ड Hatches जान्न चाहनुहुन्छ?
केर्न्स-सेयर सिन्ड्रोम के हो?
सिंहावलोकन र नयाँ रुझान: साइटहरु बनाउनको लागि प्रविधिहरू
ब्रोकोली कसरी खाना पकाउनु
रूस उल्लेखनीय व्यक्तित्व: सूची। रूस को इतिहास मा उल्लेखनीय व्यक्तित्व